Ukwethulwa kwesathelayithi i-Copernicus Sentinel-6 ukuqapha amazinga olwandle - Micro-Semiconductor.com
Ukwethulwa kwesathelayithi i-Copernicus Sentinel-6 ukuqapha amazinga olwandle
Ngokusebenzisa i-SpaceX Falcon 9 ukuqeda ngempumelelo ukwethulwa, isathelayithi entsha - okwakamuva ochungechungeni lweziphuphutheki ezakhiwe ngokuhlanganyela yiYurophu ne-USA - kuhloswe ngayo ukulandela amazinga olwandle akhuphukayo kusetshenziswa ubuchwepheshe bamuva be-radar altimetry.
Ngokusho kwe-European Space Agency, lezi zilinganiso zibalulekile kusayensi yezulu nasekwenzeni inqubomgomo.
Iphethe isathelayithi engu-1.2 tonne iSentinel-6, irokhethi le-Falcon 9 lasuswa eVandenberg Air Force Base eCalifornia ngomhlaka 21 Novemba.
Isathelayithi yahanjiswa emzileni wayo ngaphansi nje kwehora ngemuva kokuphakanyiswa futhi ukuxhumana kwaqalwa ngempumelelo esiteshini somhlaba e-Alaska.
Izilinganiso zobuso bolwandle
Umqondisi Wezinhlelo Zokuqaphelwa Komhlaba ze-ESA, uJosef Aschbacher, ubeke amazwana:
“Ngiyaziqhenya kakhulu ngokubona ukuphakanyiswa kweCopernicus Sentinel-6 kusihlwa futhi ngiyazi ukuthi isendleleni yokuqala umsebenzi wayo wokuqhubeka nokulinganisa amazinga olwandle adingeka kakhulu ukuqonda nokuqapha ukuthambekela okukhathazayo kwezilwandle ezikhulayo. ”
“Angithandi nje ukubonga amaqembu e-ESA asebenze kanzima ukufika kuleli qophelo, kodwa futhi ne-EC, i-Eumetsat, i-NASA, i-NOAA ne-CNES, futhi-ke, sibheke kakhulu ekuthuthukiseni ukubambisana okuhle phakathi izinhlangano zethu. ”
Izilinganiso zokuphakama komhlaba olwandle zaqala ngonyaka we-1992 kanti iCopernicus Sentinel-6 Michael Freilich kuhloswe ngayo ukuthi ngokushesha izolanda induku nokwandisa le dathasethi yolwazi lwasolwandle.
Le mishini ineziphuphutheki ezimbili ezifanayo ezethulwe ngokulandelana, kusho i-ESA, ngakho-ke eminyakeni emihlanu, kuzokwethulwa iCopernicus Sentinel-6B ezothatha izintambo. Inhloso yonke izoqinisekisa ukuqhubeka kwedatha kuze kube okungenani i-2030, kusho.
Isathelayithi ngayinye iphethe i-radar altimeter, esebenza ngokulinganisa isikhathi esithathayo ukuthi ama-radar pulses ahambele ebusweni bomhlaba futhi abuyele futhi kusathelayithi. Kuhlanganiswe nedatha yendawo eqondile yesathelayithi, izilinganiso ze-altimetry ziveza ukuphakama kwendawo yolwandle.
Iphakethe lezinsimbi ze-satellites lifaka ne-radiometer ye-microwave esezingeni eliphakeme ebala inani lomhwamuko wamanzi osemkhathini, othinta ukushesha kwama-radar pulses we-altimeter.
Ungafunda kabanzi kuwebhusayithi ye-ESA.